Mkpụrụ Sugar dị iche na shuga? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Mkpụrụ shuga - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Mkpụrụ shuga - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Mkpụrụ Sugar dị iche na shuga?
Sugarn'imemkpụrụ osisigbakwunyereshugaabụghị otu ihe, ka Lauri Wright, ọnụ na-ekwuchitere Academy of Nutrition and Dietetics kwuru. Ma ọbụna maka ndị na-enweghị ọrịa shuga,shugan'imemkpụrụ osisibụ nhọrọ ahụike ka mmakarịa shugasite na isi mmalite ndị ọzọ, dị ka onye na-edozi ahụ bụ Wright si kwuo.Ọgọst 8, 2017
Ka anyị gaa n’ihu ma bido n’emere painia nke mbụ. Ugbu a painiapulu bụ mkpụrụ osisi na-ewu ewu n'ọtụtụ amaara m na m hụrụ painiapulu n'anya ọ dị ezigbo mma n'ihi na ịnwere ike itinye ya n'ime insmoothies iji mee ka ihe dị ụtọ na mgbe anyị na-ele painiapulu o nwere ọtụtụ uru ahụike yana pineapple ọkachasị ga-enwe ihe dị ka gram 16 nke shuga kwa iko dị mma, mara mma ntakịrị shuga na nwa nwoke a na nke ahụ bụ ihe, dịka m kwuru, ntakịrị dị elu karịa shuga mana ọmarịcha ụtọ ka anyị kwuo maka mmiri mmiri mgbe anyị zutere Ikiri mmiri mmiri ọ bụ n'ezie ọkacha mmasị ezinụlọ m n'oge ọkọchị. Anyị na-apụ n'èzí Anyị nwere obi ụtọ igwu egwu na anwụ na-ekpo ọkụ na mmiri mmiri dị mma, m na-ekwu na ọ na-ejuputa ebe ahụ ma n'ezie shuga na-atọkwa ezigbo ụtọ mgbe anyị lere anya na Watermelon, anyị na-enweta ihe dịka gram 10 nke shuga kwa iko , ugbua o pere mpe karịa pineapulu anyị ebe a, mana ihe a bụ e na watermelons ga-abụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ hụkwara n'anya ka anyị kwuo maka mkpụrụ osisi ndị ọzọ gbasara osisi strawberries dị ukwuu m na-ekwu ka anyị f ace it strawberries bụ otu n'ime mkpụrụ osisi na-edozi ahụ ị nwere ike ị rie rie otu iko strawberries wee nweta ihe dị ka gram 5.4 nke shuga na-abụghị nke ukwuu shuga nke na-adịghị njọ maka strawberries ọkachasị na uru ahụike niile eburu. ya na nri di iche-iche nke diri gi nma ugbua ugbua, bluuberi bu ezigbo ihe nkem nke gi na amata mgbe m na-ele nkpuru osisi ndia na nke na amasi m nma bu ihe ihere nihi na achoputara na m masiri ha n'ihi na ha di elu shuga.
Onye a nwere ihe dị ka gram 15 nke shuga kwa iko, yabụ blueberries, ọ bụ ezie na ha na-edozi ahụ, nke dị elu na antioxidants, ọ ga-adịtụ elu karịa shuga shuga mgbe ọ bịara na mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi. stalk na blakberị blakberị na-atọkwa ụtọ, ha na-abịa ihe dị ka gram asaa nke shuga kwa iko M hụrụ n'anya blakberị dịka nke ọma ma ọ bụ ihe ọtụtụ mmadụ na-enwe obi ụtọ, ugbu a mkpụrụ osisi ndị a nwere micronutrients dị iche iche ga-enwe ọtụtụ uru ahụike na mkpụrụ osisi ndị a na otu ihe a metụtara enyi anyị ebe a, raspberries ugbu a, raspberries dị ntakịrị karịa blakberị n'ihe gbasara ọdịnaya shuga m ga-enweta ihe dị ka ise ise gram shuga kwa iko nke mkpụrụ osisi m hụrụ n'anya raspberries amachaghị m oke ọnụ ha bụ maka mkpụrụ osisi ọhụrụ mana eziokwu bụ na ị nwere ike ịchekwa ego ole na ole ma zụta ụfọdụ ndị oyi kpọnwụrụ ma ka na-enweta ụfọdụ ụdị ego ha ga-enye ma n'ezie, mgbe ọ bịara na oyi kpọnwụrụ na-abụghị nke oyi kpọnwụrụ, m na-ekwu na ihe ọhụrụ ahụ dị ụtọ, mana nke oyi kpọnwụrụ ka nwere otu nri ahụ ma anyị ga-echeta na anyị na-ekwu maka mkpụrụ osisi ndị ọzọ, ụfọdụ ihe ndị ọzọ kachasị amasị m nke m hụrụ n'anya ga-abụ mango ugbu a. n'ezie dị ka m kwuru, na blueberries mango a nwere gram 46 nke dị na ya nakwa na 'ọtụtụ shuga maka otu mkpụrụ osisi ka anyị wee kpachara anya maka ndị a n'ihi na m pụtara, ka anyị chee ya ihu, m na-ekwu , ebe ọ bụ na shuga niile abụghị otu, anyị enweghị ike ikwu na mkpọ lemonade bụ otu ihe ahụ mgbe ị na-eri mkpụrụ osisi ka ụfọdụ ndị na-achọ ikwu 'mana ọ ka nwere obere shuga ebe a maka ụfọdụ ọnọdụ, anyị nwere ike Achọghị izere iri shuga shuga ahụ mgbe niile, ọbụlagodi na ọ sitere n'okike Ka anyị gaa n'ihu lee mkpụrụ osisi mkpụrụ vaịn a, ọ dị mma, agrapefruit bụ ihe m hụrụ ụmụaka n'anya ugbu a dịka mkpụrụ osisi grape ma ị maara ntakịrị iwe, ọ dị nwute, mgbe m na-etolite, ana m etinye shuga na mkpụrụ osisi vaịn, yabụ a kụziiri m iri nri ndị a ị na-ewere ngaji nke shuga wee wụsa ya niile wee rie mkpụrụ osisi mkpụrụ vaịn anyị anaghị eme nke a n'ụlọ m mana nnukwu ihe gbasara nkpuru osisi vaịn a bụ na enwere naanị gram asatọ nke shuga kwa mkpụrụ osisi mkpụrụ vaịn, yabụ def initive onye mara ezigbo mma ma dịkwa ezigbo ụtọ ugbu a, unere bụ nnukwu ọkacha mmasị Rite nke ị maara ndị ọgba ọsọ enweghị m ike iche maka agbụrụ m gara - ma ahụbeghị banana ọ bụla na ngwụcha, yabụ ka anyị lelee unere n'ihu otutu Otutu ka otutu ndi egwuregwu dika ha n'ihi na ha nwere potassium n'ime ha ha nwere ufodu magnesium n'ime ha na ihe gbasara unere bu na ha nwere ihe dika gram iri na asaa nke shuga na banana wee mara ihe ma oburu na-agba 5k a 10k kebab anyi echegbaghi ​​maka shuga ahu n'ihi na aru gi gha enwe ike iji ya mee ihe nke oma iji weghaputa unere bu oke gram 17 nke sugar perbanana nke di elu n’elu sk ala mana obughi ihe ojoo anyi na ekwu. pear Na na na obere pear nwere ihe dị ka gram 17 nke shuga, ọ bụ ezie na m hụrụ n'anya ube na ha na-atọ ụtọ, ọ bụ n'ezie otu n'ime ihe ọ natureụ natureụ nke okike ebe a enweghị ọtụtụ nri, mana ọ bụ ezigbo shuga na otu ihe ahụ apụl ahụ na-acha uhie uhie ebe a na-anọdụ n'ihe dịka 23g shuga, ugbu a nke a d apụl, ị maara na abụghị m nnukwu f apple apụl, mana ị maara, maka votu anyị ga-elebara anya na ọdịnaya shuga na nke a. Ugbu a ụfọdụ mkpụrụ osisi glycemic dị ala m masịrị, dịka lemon, ọ dị mma naanị na anyị ga-enwe ihe dịka gram 1.5 nke shuga kwa lemon nke dị ntakịrị ma ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji eri nri ketogenic bụ ndị mmadụ, ibu ọnụ, ndị chọrọ ịnweta vitamin C ma tinye ya na mmiri ha ma ọ bụ detụ mmiri ha mmiri wee nweta uru ahụike niile mana na-agbakwunye ọtụtụ shuga na ndụ ha, tiketi gị yana lemon bụ mkpụrụ osisi ọzọ, nke ị bụ nwere ike iji bụ ahịrị n'ihi na nke a nwere naanị ihe dị ka gram 1.1 nke shuga kwa lime m na-ekwu na ọ bụ ya mere mkpụrụ osisi a ji bụrụ acidic na ha bakwara oke uru ma a bịa na ahụike gị dum.
Mkpụrụ ikpeazụ m chọrọ ikwu maka Kiwinow ebe a, ọ ga-abụ Kiwinow, ma a bịa n'ihe banyere kiwi, nke ahụ ga-abụ mkpụrụ nke nwere gram shuga isii, ọzọkwa abụghị nri dị ukwuu ebe a ezigbo ego e sugar ya mere otu n’ime ndị dị ka ha ma, jiri ya nwayọ ma a bịa n’ihe banyere mkpụrụ osisi niile a. Otu ihe m choro ime bu iwebata otu ndi okachamara ma nyere aka choputa nke ha chere kachasi nma, mana tupu anyi eme nke a, lee ihe m choro ikwu maka ya, kedu ndi anyi choro iri na wannokay yabụ ka anyị were ndị a strawberries ka anyị tinye ha n'akụkụ a ka anyị were mkpụrụ osisi ndị a niile tinye ha n'akụkụ a ka anyị were lemon ka anyị were nzu ahụ ka anyị tinye ebe a wee greepu mkpụrụ osisi tinye ihe niile ọzọ tinye peeji a ọ dị mma ebe a bụ ihe ị hụrụ ndị a bụ ụfọdụ mkpụrụ osisi glycemic dị elu ndị a bụ ụfọdụ mkpụrụ osisi glycemic dị ala na ime ihe n'eziokwu ka anyị gaa n'ihu tinye blueberries ebe a n'agbanyeghị na akpọrọ m asị ịme nke ahụ n'ihi na ọ na-ewute mmetụta m, m ga-etinye ya ebe a n'ihi na ọ n'ezie na-adaba na ụdị glycemic dị elu ọzọ, ọtụtụ uru nke ị nwere ọtụtụ ezigbo uru nke bluuberi dị iche iche micronutrients na antioxidants, mana ka na banyere otu n'ime mkpụrụ osisi ahụ nke dị obere na glycemic index n'ọtụtụ. Yabụ, ọ bụrụ na ị bụ onye na - eso keto ala, ị ga - anọrịrị n'akụkụ nke a bụ mkpụrụ osisi ị ga - elekwasị anya ma ọ bụrụ na ị bụ onye ị na - amaghị na ị nwere ike iri obere nri ndị a? Nke a bụ ihe ọzọ ị ga-atụle ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eguzogide oke ọnwụ, ọ bụrụ na ị bụ onye nwere nsogbu cholesterol, ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ọrịa metabolic ọrịa ọbara mgbali elu na enweghị nsogbu hormone na ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ na-abịa? ma ị na-achọ ịgwọ ahụ gị, ị ka ga-anọ n'akụkụ ahụ nke ụdịdị dị iche iche dịkwa mma n'ihi na ndị a bụ mkpụrụ osisi glycemic dị ala.
Anyị na-anwa ime ka ogo insulin anyị belata ka ogo glucose anyị belata mgbe anyị na-anwa ịgwọ ya nke ahụ. Anyị chọrọ ịbụ, ọ bụ n'akụkụ a. Ugbu a ọ bụrụ na anyị agbalịa ime ka shuga dị ala, yana mkpụrụ osisi ndị a abụghị ihe egwu ha adịghị njọ ụfọdụ ndị na-ekwu na ha nwere fructose n'ime ha ọ dị mma mana ọ bụ fructose na okike yana ọ dịkwa elu na mkpụrụ osisi micronutrients nwere ọtụtụ uru ahụike. nụ ka ụfọdụ ndị dị ka m na-ekwu na ha ji mkpụrụ osisi tụnyere lemosị ma ọ bụrụ na enwere gram 40 nke frikọl sirop na soda na obere caramel caudillor na flavors artificial na ọ nweghị ihe dị mma maka gị nke na-abụghị otu eriri ọtụtụ nri na ị maara ihe achọtara na-atọ ụtọ n'okike, ọ dị mma na anyị enweghị ike iji ya tụnyere na anyị enweghị ike ịbụ ihe ọchị banyere mkpụrụ osisi, anyị ga-ewere ya, n'ezie, maka ihe ọ bụ na mgbe ị na-achọ ịgwọ, nọrọ na nke a peeji nke ọ bụrụ na ị bụ onye siri ike ma chọọ ịnụ ụtọ ụfọdụ n'ime mkpụrụ osisi ndị a na-enweghị atụ ndị ọkachamara anyị nọ ebe a, anyị ga-ahụ mkpụrụ osisi ị ga - ahọrọ ma ọ bụrụ na ị ga - ahọrọ otu n'ime mkpụrụ osisi ndị a ihe Tyler ga - abụ ma ọ bụrụ gaba izizi, chere nke ọma so th na Tyler na-enweta grapefr uit gram asatọ nke shuga kwa mkpụrụ osisi ezigbo nhọrọ ala na shuga dị mma n'ebe ahụ ezigbo onema ị na-aga n'ihu ma họrọ nke gị site na ndị a niile ebe a, kedu ihe ị ga-achọ, ọ dị mma ya mere ọ chọrọ Mangothis Mango nwere gram 46 shuga kwa mkpụrụ osisi, n'ihi ya ị na-enwe ọ thatụ na ụgwọ eze ahụ agbagogogo naanị na anyị amatalarịrị ihe ọ masịrị ya, ube ahụ nwere gram iri na asaa nke mkpụrụ osisi n'otu mkpụrụ osisi, yabụ nke ahụ bụ ihe ndị ọkachamara m na-ahụ ugbu a n'ihi na m chọrọ ime ya n'ihi na ụmụaka n'amaghị ama nanị bulie elu sugar mkpụrụ osisi mara mma nke ukwuu ma ụmụaka ma ndị okenye na-eme ya.
Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ị ghasaa ụfọdụ mkpụrụ osisi m hụrụ n'anya, m hụrụ mango n'anya, ma a bịa n'ihe bekee, m hụrụ blueberries n'anya, ọ bịara bụrụ na ụfọdụ n'ime mkpụrụ osisi ndị nwere abụba ugbu a bụ otu n'ime ihe anyi kwesiri ighota bu na nkpuru ndia adighi nma, ha adighi nma dika ha si di, mana ihe bu na oburu na ebum n’uche ahu ike anyi agaghi n’uzo ga enye gi ohere, anyi choro izere ya. Ihe ọzọkwa bụ na anyị ka ga-eri ha nwayọ ma anyị achọghị ka ụmụaka anyị rie mkpụrụ osisi na ụba ha, ma ha ka nwere ike bepụ ezé ha ma ọ nwere ike bụrụ ihe na-emebi ahụ ike ha. niile na stof na otú na Generalberries n'akụkụ a nke wara wara ma ọ bụ ebe ị chọrọ ịbụ karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agbalị ịgwọ gị ahu na mgbe ahụ na ọ dị mma iji mkpụrụ ndị ahụ na-eri mkpụrụ ndị ahụ, dị nnọọ rie ha frugal na mgbe anyị na-eche nke mkpụrụ osisi ndị a dị iche iche na anyị ekwesịghị ile anya dị ka a ga - asị na ha dị njọ, anyị ekwesịghị ile ha anya dị ka ihe na - adịghị mma, ọ dabere na ihe ị nwara, ị gaghị eri ha na nri acetogenic, mana ị gha eri ya ma soro otu nke oma, ya mere o bu ihe gbasara ebum n’uche gi na ihe ichoro inweta ma oburu n’acho imuta uzo esi eri nri di nma ma sorodi nri nri. Lelee isiokwu ndị a dị n'elu ka m na-akwatu ozi a niile maka gị, ee e, ihe ikpeazụ m chọrọ ikwu bụ na m ga-enwe mmasị ịnụ ka ị si amasị mkpụrụ osisi ndị a iji jiri ire ụtọ nke bụ ọkacha mmasị gị Kedu ndị ị mere zere na mpaghara ebe dị n'okpuru ebe a, n'ihi na m ga-enwe mmasị ịnụ echiche gị na ya, kesaa ndị enyi gị isiokwu a ma nye ya mkpịsị aka gị yana ọbụlagodi na ị nwere ike ime nke ahụ maka m, gbakwunye dị ka gị na mpaghara ebe ị na-ekwu. Tochọrọ ịke isiokwu Nke a bụ ụdị ederede ọhụụ m na-anwale na ọwa m Emebeghị ihe ọ bụla dịka nke a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ Ya mere dee na ngalaba nkọwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya ma eleghị anya anyị ga-emekwu nke ya mechaa lelee edemede a ebe a.
Otu n'ime ihe ndị anyị chọrọ ime bụ ịghọta ihe ebum n'uche anyị, ịghọta ebe anyị chọrọ ahụike anyị, wee mee mkpebi ndị ahụ etu o kwesiri
Gịnị ka a na-akpọ sugar mkpụrụ osisi?
Mkpụrụnwere ụdị abụọ nkeshuga: fructose na glucose. The otosịrị iru nke ọ bụla ịdị iche iche, ma ọtụtụmkpụrụ osisiihe dị ka ọkara glucose na ọkara fructose. Glucose na ebuli obara elushuga, ya mere, ahụ́ ga-eji insulin mee ihe n’ụzọ nke ọma. Fructose anaghị ebuli ọbarashuga.
Yabụ ọtụtụ afọ ndị mmadụ chere fructose, 'Ee, nke ahụ dị mma. Yabụ mara ihe nwere ike ịdị na nke ahụ? 'Nsogbu dị na fructose bụ ụzọ e si eme ka ọ daa. Yabụ ka ahụ gị dum nwere ike iji glucose mee ihe, ọ bụrụ na ị rie achịcha, dịka ọmụmaatụ, ogo insulin na-arị elu, sel niile dị ahụ gị ga-eji glucose a.
Ya mere akwara gị, umeji gị, akụrụ gị na ihe niile. Ọ bụrụ na ị na-eri fructose, ọ dịghị onye n'ime ha nwere ike iji fructose n'ihi na enweghị ike ịgbari ya, yabụ ọ na-aga na imeju gị. Imeju gị enweghịkwa ihe ọ bụla gbasara ya n'ihi na enwere ọtụtụ glucose gburugburu.
Yabụ mgbe ị na-eri shuga, shuga shuga, ọ bụ glucose, fructose, ị nwere ọtụtụ glucose gburugburu, yabụ ahụ gị achọghị ya. Ọ na-aga imeju gị, ya mere, ọ gbanwere abụba ozugbo. N’oge na-adịghị anya, ọ na-atụgharị imeju imeju.
Ọ bụrụ na ị mepee umeju na imeju abụba, mgbe ahụ ị ga - enweta mgbochi insulin na pịnye ọrịa shuga 2, nke bụ n'ezie nsogbu bụ isi nke abụba a nke imeju. Ya mere, akụkọ banyere fructose bụ na mgbe anyị na-ekwu maka shuga enwere ụdị ọrụ aka ọrụ nke gụnyere glucose na fructose, ndị a bụ isi shuga na ahụ. Mgbe anyị na-ekwu maka shuga okpokoro, ọ bụ n'ezie ihe a na-akpọ sucrose, nke bụ otu molekụl nke glucose na otu molekul nke fructose.
Yabụ ọ bụrụ na anyị eleghara ihe dịka lactose na galactose na ndị ọzọ anya, anyị na-ekwukarị banyere glucose na fructose. Yabụ mgbe ị riri achịcha, ọka wit ma ọ bụ osikapa ma ọ bụ ihe yiri ya, ị na-ekwukarị banyere agbụ glucose nke mejupụtara stachi. Yiri achịcha, osikapa na poteto niile bụ glucose ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ fructose.
Fructose na okpokoro okpokoro bu toone, ya mere o bu glucose a fructose, na nkpuru nwere otutu fructose. Fructose bụ ihe na-atọ ụtọ na-eme ka carbohydrate, ma ọ bụrụ na ịlele nha dịka glycemic index, fructose dị ezigbo mma n'ihi na mgbe ị tụrụ shuga ọbara, ị na-atụle shuga shuga, yabụ n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eri fructose, fructose abụghị glucose adịghị gosipụta ka ọkụ na ọbara shuga gị. Mgbe ị na-eri achịcha, maka na ọ bụ glucose, ọ na-egosi dịka mmụba na shuga shuga gị.
Ya mere, mgbe ị na-eche banyere ya, ọ bụrụ na ị ga-ewere otu paụnd achịcha ma ọ bụ pasta ma ọ bụ ihe ọ bụla, kwuo na ahụ gị dị kilogram 180, kilogram 180 nke ahụ gị na-eri glucose. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị were paụnd shuga, ọkara nke ahụ bụ glucose na ọkara ọzọ bụ fructose. Yabụ 180 pound ga-eji glucose, mana ụdị ọkara shuga shuga na-aga na imeju gị, dịka umeju paụnd 5.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, fructose dị oke, nke ka njọ karịa glucose nke na-akpata ụdị ọrịa shuga 2, oke ibu, na nkwụsị insulin. Nke ahụ bụ n'ezie ihe nzuzo nke kpatara obodo ndị a dị ka China na 1980s, ebe ha riri ọtụtụ osikapa ọcha, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị rie osikapa na akwụkwọ nri, ọ nweghịkwa ọrịa shuga. Ihe kpatara nke a bu na aru ya, uru ya, na ihe nile n’eji ya eme ihe.
N'adịghị ka fructose, nke na-aga na imeju gị, ọ na-akpata nkwụsị insulin a. Yabụ ọ bụrụ n'ịchebara ya, ị nwere otu narị na iri asatọ nke anụ ahụ nwere glucose. Enwere imeju imeju ise maka fructose, yabụ iri shuga dị iri ma ọ bụ iri abụọ dị njọ karịa iri nri.
Ndị mmadụ amatakwala nke ahụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị jụrụ nne nne gị, ọ ga-agwa gị na ihe mbụ ị ga-eme iji felata bụ ịkwụsị iri shuga na ịghara iri ụtọ. Ọ na-eme gị nke ukwuu.
Ha nwere ike ịbụ otu calorie, mana etu ha si arụ ọrụ dị iche. Nri bụ ihe bụ isi, echekwara m na ọ bụrụ na ị na-ele shuga anya, ọ dị obere. Ọtụtụ mmadụ bepụ ya.
nọmba 1 arọ ọnwụ Erere 2016
Ya mere enwere olile anya na ozi na shuga bụ nnukwu nsogbu ga-apụ. Nsogbu bu na onwere otutu uzo zoro ezo nke suga na ndi ozo.
Shuga sitere na mkpụrụ osisi ọ dị njọ maka gị?
Mkpụrụnwere ekeshuga, nke bụ ngwakọta nke sucrose, fructose na glucose. Ọtụtụ ndị anụwo nke ahụshugabuọjọọ, ma na-eche na nke a ga-ya mere emetụtamkpụrụ osisi. Mana fructose bụ naanịemerụkarịrị akarị, ọ bụghị mgbe o simkpụrụ osisi.Eprel 7, 2018
Kedu mkpụrụ osisi kachasị elu na shuga?
Kedu MkpụrụNwere KasịSugar?
2 / 13. Mkpụrụ vaịn. Otu iko ndị a nwere ihe dịka gram 23shuga.
3 / 13. Cherị. Ha na-atọ ụtọ, na ha nwereshugagosipụta ya: Otu iko n’ime ha dị gram iri na asatọ.
Ọ dị ka akụkụ dị mfe, mkpụrụ osisi nwere shuga, ya mere mkpụrụ osisi nwere carbohydrates, yabụ ị nwere ike iche na a ghaghị izere mkpụrụ osisi niile na nri keto. Ọ dabara nke ọma maka ndị hụrụ mkpụrụ osisi n'anya, ọ bụghị dị ka nke sliced ​​na akọrọ. mkpụrụ osisi A ga-ezere ya na nri dị ala, mana ụfọdụ dịkwa mma.
Na njedebe, ka anyị lelee mkpụrụ osisi nwere ike iri dị ka akụkụ nke nri Aketo na ndị na-eyi egwu izere ketosis gị siri ike. Enwere ike iri mkpụrụ osisi sitere na mkpụrụ osisi mara mma ma ọ bụ nke ndu, ma ọ bụ ọzọ n'ihe egwu ejiri ya na usoro nri Ka anyị leba anya na mkpụrụ osisi kachasị mma ịhọrọ mgbe ị ga-ahọrọ mgbe mkpụrụ osisi ụfọdụ nwere carbohydrates zuru oke nke na ọbụlagodi otu mpempe na - eme ka nri carb gị zuru oke maka ụbọchị ahụ. , ụfọdụ nwere ntakịrị obere shuga mgbe ịchọrọ ịbịaru mkpụrụ osisi Ndị a bụ mkpụrụ osisi ịchọrọ maka mkpụrụ osisi Strawberries Blackberries na raspberries bụ onye ọ bụla ikwu obere mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ nke nwere ihe dị ka 5.68, 4.9 na 5.4 fornet carbohydrates, karị, kwa ihe dị ka 3 / 4 iko na-eje ozi.
Berry juputara na ihe oriri, ha juputara na vitamin, mineral na antioxidants, ụfọdụ ọmụmụ jikọtara mkpụrụ osisi na mbelata mbufụt, iweda cholesterol na ibelata ọrịa obi. Mkpụrụ osisi Star bụ mkpụrụ osisi na-ekpo ọkụ na-atọ ụtọ nke na-eme nnukwu mgbakwunye na nri keto. Mkpụrụ osisi kpakpando nwere mkpụrụ osisi mara mma nke 3.93, ha na-atọ ụtọ nke ukwuu na anụ ụtọ crunchy nke dị n'etiti apụl na grape, nke nwere ụtọ dị ụtọ na uto, dị elu na fiber na vitamin C ma na-enye ọtụtụ ndị ọzọ Ahụ ike Uru mgbe ịkpụ ya nwekwara ụdị kpakpando mara mma nke na-adị mma na Salad Avocados bụ nri keto dị oke ọnụ n'ihi nnukwu abụba ha, obere protein ha na obere ọdịnaya carbohydrate, na-eme ha nhọrọ nri kacha mma maka onye ọ bụla na-achọ obere carb Diet soro , na-agbakwụnye na ọ dị elu na abụba na-edozi ahụ ike, nnukwu potassium karịa bananas, n'ihi na ọ nwere ike ịbawanye ụba nke antioxidants na-soluble abụba ị nwere ike inweta site na nri osisi, mkpụrụ osisi keto zuru oke Na naanị 1 isi 8 4 gram net carbohydrates kwa ọkara ube oyibo ị pụrụ ịnụ ụtọ ha free ube oyibo egg Ne nke anyị mmasị Vorite keto oriri nwere ike ụtọ ghọọ keto ice ude ma ọ bụ savory ụtọ na a n'akụkụ nri nke guacamole ma ọ bụ a tomato taco salad, mgbe ọtụtụ kit chens na-emeso tomato dị ka akwụkwọ nri, na tomato nwere ike tinye ha elu, ọkachasị mgbe ha na-esi nri Ebe ọ bụ na ha bụ nnukwu mmiri ma nwee ike sie nri dị elu karịa carbohydrates, Melons Melons yiri ka ọ dị na njedebe dị ụtọ karị, ma ọtụtụ melons n'ezie nwere ihe ịtụnanya dị obere nke carbohydrates na 100 gram nke anyụ, nke nwere akara asaa na otu gram nke netwọk ise nke Melon na-atụle ntụpọ asaa na itoolu gramị mmanụ awụ bụ akara asatọ na gram atọ dịka mkpụrụ osisi ndị ọzọ attentionaa ntị na ole ị na-eri ọ dị mfe ịfefe , ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere agụụ shuga, na-eji akpịrịkpa kichin mgbe niile iji tụọ ma lelee ịdị arọ nke akụkụ gị Ihe nrịba nke carbohydrate ọzọ Olive Bo Chicken na nnu oliv abụghị ihe mbụ na-eme n'uche mgbe ị na-eche maka mkpụrụ osisi, mana ha bụ otu. nke mkpụrụ osisi kachasị-enyi na enyi n'ebe ahụ, e nwere naanị isi atọ na otu net carbohydrates na ihe dị ka mkpụrụ oliv ojii 25 nke na-eme ka ha dị mma Makinghọrọ maka nri mgbe ị na-achọsi ike ihe bara ọgaranya na nnu, mkpụrụ osisi ndị ọzọ dị ka apụl, unere, mkpụrụ vaịn, piich, kiwi na oroma bụ ihe kachasị mma maka ịhapụ keto maka ndepụta zuru oke nke mkpụrụ osisi ịhọrọ na nke onye ị ga-ahọrọ ga-asị mba ijide n'aka guo akwukwo nkpuru osisi kachasi nma nke nwere ike belata ma jue ihe obula Na nkpuru ahihia ma oburu na ihapu nkpuru si na nri gi, i gha eri otutu akwukwo nri na mineral nke inine n’eme ka nkpuru ghara idi nkpa, ma mgbe ichoro ihe di nma. nke mkpụrụ osisi na-ebilite, soro ntuziaka anyị na ị gaghị agahie ụzọ ozugbo ị nwetara ọkacha mmasị gị keto-friendly n mkpụrụ osisi amata.
free igwe kwụ otu ebe
Gịnị bụ healthiest eke sugar?
Stevia nwere ike ịbụahụikenhọrọ, nke xylitol, erythritol, na yacon syrup na-esote.Shuga nke shugadị ka sirop marop, molasses, na mmanụ a honeyụ na-adịghị emerụ ka ọ na-adịkarịshugama nwekwaa uru ahụike. N'agbanyeghị nke ahụ, a ka kwesịrị iji ha mee ihe. Dị ka ọtụtụ ihe na nri, imeru ihe n'ókè bụ isi.Jun 4, 2020
Mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi adịghị mma maka ọrịa shuga?
Mkpụrụnwere ọtụtụ vitamin, mineral, na faiba, ma ha nwekwara ihe okike dị elushugaọdịnaya. Agbanyeghị, nke a na-eme ha nnukwu dị ka onye edochi maka ite na-atọ ụtọ na tebụlshugadị ka mgbakwunye maka ụtọ. Ohaneze, iri nrimkpụrụ osisidị ka akụkụ nke nri na-edozi ahụ ekwesịghị ịbawanye ohere nkeọrịa shuga.
Enwere m ike iri mkpụrụ osisi na enweghị shuga?
Gụnyere dummkpụrụ osisin'imeọ bụghị-nri shuga nwere ikeka na-enwe ahụ ike. Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmadụ ahọrọrieFikieremkpụrụ osisi, hakwesịrị imeya mere na imeru ihe n'ókè ma chọọ ụdị dị iche iche na-agbakwunyeshuga.
Mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi nwere ike ime ka ị buru ibu?
Fructose, ndịshugan'imemkpụrụ osisi,nwere ikeduruibu ibuọ bụrụgịrie oke.Ọnwa iri 18, 2012
Gịnị mere e ji machibido Stevia iwu?
Ọ bụ ezie na ọ dị ebe niile n'ụwa, na 1991steviabụmachibidorona United States n'ihi ọmụmụ oge mbụ nke na-atụ aro na ụtọ ahụ nwere ike ibute ọrịa kansa. Na Disemba 2008, FDA nakweere arụmụka a, kwupụtarasteviaGRAS, ma kwe ka ejiri ya mee ihe na nri nri US.
Ndi ndi oria mamari kwesiri iri oroma?
Ọ bụrụ na ị nwereọrịa shuga,na-eri nriọtụtụ mkpụrụ osisi - gụnyereoroma- dị mma maka ahụike gị. Dumoromanwere ike ime ka shuga shuga dị n'ọbara gị kwụ otu ebe n'ihi obere GI ha, ọdịnaya ya na eriri ya, yana nri ndị ọzọ.Abali 26, 2021
Kedu ụdị shuga dị na mkpụrụ osisi?
Mkpụrụ osisi nwere shuga na-apụ apụ nke a na-akpọ fructose, ma ọ bụrụ na ị na-eri mkpụrụ osisi dum, ị na-enweta fructose na mkpụrụ ndụ dị mma nke eriri, nke na-enyere aka ịchịkwa ogo shuga shuga ma belata spike site na iri shuga.
Kedu nke kaara gị mma mkpụrụ osisi ma ọ bụ shuga?
Ma e jiri ya tụnyere shuga a nụchara anụcha, mkpụrụ osisi bụ nhọrọ ka mma maka oriri ya mgbe niile. 'Mkpụrụ osisi nwere ọtụtụ ihe ndị na-edozi ahụ n'ime ha dị mkpa maka ahụ anyị,' Fleming na-ekwu, na-ekwu banyere vitamin C (nke a tụrụ aro), vitamin K, na fiber.
Kedu ụdị shuga dị na ube?
Fruitsfọdụ mkpụrụ osisi na ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi, dị ka ube, nwere shuga mkpụrụ osisi. Mkpụrụ shuga, ma ọ bụ fructose, dị n'ọtụtụ ụdị mkpụrụ osisi chara acha. Thedị ihe omimi nke fructose - ma ọ bụ mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi - bụ ihe dịka dextrose na glucose.